Shuva Bihani – Shuva Bihani News Nepal
काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकता कायम राख्ने नाममा गलत विचार र प्रवृतिको ढाकछोप गर्न नसकिने बताएका छन् । कम्युनिष्ट नेता तुलसीलाल अमात्यको २३ औं स्मृति दिवसका अवशरमा आयोजिक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले गलत विचार र प्रवृतिहरुको ढाकछोप नगरी फछ्र्यौट गर्नुपर्ने बबताए । कुनै पनि बाहानामा पार्टी विभाजन हुनुहुँदैन भन्ने जनताको चाहाना नेतृत्वले बुझेको उल्लेख गर्दै…
धरहरा पुनःनिर्माणको हालसम्म ३९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । भूकम्प गएको तीन वर्ष बितेपछि निर्माणको कामले गति लिएको हो । दुई वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी रमन कन्सट्रक्सनले धरहराको पुनःनिर्माण शुरु गरेको छ । निर्माणको लागि रु तीन अर्ब ४८ करोड लाग्ने जनाइएको छ । पहिलाको धरहरा भन्दा नयाँ बन्ने धरहराको चौडाइ ठूलो हुनेछ । जहाँ दुईवटा लिफ्ट हुनेछ…
सिङगिङ रियालिटी सो नेपाल आइडल सिजन–३ मा दुईवटा श्रृंखला सकिँदा एकजना प्रतिस्पर्धीले गोल्डेन माइक पाएका छन् । काठमाडौं अडिसनमा अडिसन…
गायक तथा संगीतकार सुर्य दयालुद्वारा स्वर–संगीतबद्ध तथा रचनाकार श्याम प्रसाद पौडेलको रचना रहेको आधुनिक गीत 'भुल'को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको…
बलिउडमा अहिले बक्स अफिसमा कसको राज चल्छ ? यसको जवाफ एक साताको अन्तरमा रिलिज भएका २ चलचित्रको व्यापारले पनि दिनेछ । डिसेम्बर २० तारिखमा रिलिज भएको नायक सलमान खान अभिनित चलचित्र ‘दबंग ३’को व्यापारलाई डिसेम्बर २७ तारिखमा रिलिज भएको नायक…
प्रसिद्ध गायिका आशा भोस्ले नेपाल आउँदै
सन् २०१९ को ‘मिस वर्ल्ड’को उपाधि जमैकाकी सुन्दरी टोनी एन सिंहले जितेकी छिन्। लण्डनमा आयोजना भएको ‘मिस वर्ल्ड २०१९’मा विश्वका १११ देशका सुन्दरीलाई पछि पार्दै जमैकन सुन्दरी टोनीले उपाधि हात पारेकी हुन्। यस्तै प्रतियोगीताको फस्ट रनरअप फ्रान्सकी सुन्दरीले जितेकी छिन्…
सानैमा आमा गुमाएको र बाबुबाट टाढा भएको एक युवकको मनोदशा कस्तो होला ? बाबुले जबरजस्ती विदेश पठाएका कारण हङकङ पुगेका युवाहरु ११ वर्षपछि फर्केर आउँदा नेपालप्रति कस्तो व्यवहार गर्लान् ? के उनीहरु नेपालमै हुर्केको जस्तो व्यवहार गर्लान् ? वास्तविक जीवनमा…